USol'siden Airbnb eStølsvigen eHisøy e Arendal. - I-Airbnb
USol'siden Airbnb eStølsvigen eHisøy e Arendal.
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguSolveig Lohne
USolveig Lohne yi-Superhost
Ifakwe ifanitshala endala kwisakhiwo esitsha. Isakhiwo sagqitywa ekwindla ka-2017. I-handlaft yaseNorway evela kwiikontraka zasekhaya.
Ikhitshi leplanga eliqinileyo elenziwe ukutshatisa noyilo oludala kunye nolutsha.
Umnyango wokungena yikopi yomnyango omdala osuka kwisakhiwo sezigodo esikufutshane.
Indlu iyilwe ngosetyenziso oluninzi engqondweni kwaye ibhetyebhetye kakhulu. Ineofisi, izabelo zokubonisa, igumbi lokubhalela, uqeqesho, isikhokelo kunye nokurenta i-Airbnb. Nantsi indawo enkulu yabantu abadala ababini + umntwana omncinci kwibhedi yokuhamba.
Indawo ethandekayo ngaselwandle nasehlathini. Uhlala emaphandleni kwaye unokonwabela iilwandle kunye namatye, kunye nenethiwekhi yeendlela ezininzi emnyango wakho. Ukunkcunkca, ukujongwa ngeenyawo ehlathini ukuya kwiindawo ezincinci kunye namatheku. Apha kukho indawo yokuzihlaziya. Uyakwazi ukuya kwindawo yokumisa izikhitshane e-Kolbjørnsvik udlula ehlathini kwaye ngaloo ndlela udlulele kwisixeko sase-Arendal. Iibhayisekile ziyafumaneka ukuze kube lula ukufikelela kwezinye iindawo kwisiqithi kunye nesixeko. Malunga neekhilomitha ezi-5 ukuya e-Arendal.
Umnini-mhlaba uyafumaneka njengomqeqeshi. Isikhokelo kwindawo yendawo ngesicelo kunye neendleko ezongezelelweyo.
Nazi abahlali abasisigxina kunye nabahlali be-cottage. Konke kuxutywe kakuhle. Usemaphandleni ngaselwandle kunye nehlathi kwindawo endala esemazantsi. Indlela emfutshane eya eHavsøysundet enemibono eya eTorungene "yesibini" lighthouse, Havsøya, Merdø njl.
Umbuki zindwendwe ngu- Solveig Lohne
Iindwendwe ezifuna ukuba zodwa ziya kufumana ngolu hlobo. Ukuba unemibuzo malunga nomnini-mhlaba, kunokwenzeka ukuba uqhagamshelane ngeSMS. Umnini-mhlaba uya kuthi ke aqhagamshelane nomqeshi okanye athumele impendulo ngomyalezo obhaliweyo.